Ime Ụlọ Mkpuchi
Ime Ụlọ Mkpuchi Sopron Basket bụ ndị otu egwuregwu basketball ụmụ nwanyị ama ama na Sopron, Hungary. Ebe ọ bụ na ha bụ otu n'ime ọgbakọ ndị Hungary na-eme nke ọma na iko iko mba iri na abụọ ma nweta ọnọdụ nke abụọ na Euroleague, njikwa klọb kpebiri itinye ego n'ime ụlọ mkpuchi mkpuchi ọhụrụ iji nwee ụlọ ọrụ dị elu maka aha klọb ahụ, dabara na mkpa onye ọkpụkpọ ahụ. ka mma, kpali ha ma kwalite ịdị n'otu ha.
E-Igwe Kwụ Otu Ebe Companylọ ọrụ Berlin Aceteam mepụtara e-igwe kwụ ọtọ nke izizi, ọrụ bụ iwulite ya n'ụzọ enyi na gburugburu ebe obibi. Ọchịchọ maka onye mmekọ tozuru oke nwere ihe ịga nke ọma na ngalaba nke Science Science na Teknụzụ nke Mahadum Eberswalde maka Mmepe na-adigide. Echiche nke Matthias Broda ghọrọ eziokwu, na-ejikọ teknụzụ CNC na ihe ọmụma nke ihe eji osisi, E-Bike nke amụrụ.
Bridal Veil Chandelier Satọdee 16 Ọktoba
Illusion Weebụsaịtị Fraịdee 15 Ọktoba
Smartstreets-Smartbin™ Sịga / Chịngọm Okpu Tọọzdee 14 Ọktoba
Karama Mmanya Nkwakọ Nri Steepụ Steepụ Ime Ụlọ Mkpuchi E-Igwe Kwụ Otu Ebe